४६ जना मधेशी मार्ने सुशिल कोईरालालाई भोट हाल्नेहरुले मधेशीका कुरा गर्न मिल्छ ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
- प्रा. लालबाबु यादव
लोकतन्त्रमा आस्था र विश्वास राख्ने कुनै पनि प्राणीले हिंसामा विश्वास गर्दैन । नेकपा एमालेले सुरु गरेको मेची महाकाली अभियान कसैका विरुद्धको अभियान होईन । यो त एमालेले आफ्ना कुरा जनतामाझ पुर्याउनको लागि यो अभियान सुरु गरेको हो । त्यसैले मधेश केन्द्रीत दलहरुले यो कुरा बुझ्नुपर्छ की, लोकतन्त्रमा अरुका पनि कुरा सुन्ने बानीको विकास गर्दै जानुपर्छ । लोकतन्त्रमा वैचारिक संघर्ष महत्वपुर्ण हुन्छ । लाठीले लोकतन्त्रमा जीत्न सक्दैन
जहाँसम्म एमालेमाथी लागेको मधेश विरोधीको आरोप छ, त्यो शत प्रतिशत झुठो छ । के एमालेले एक मधेश एक प्रदेशको विरोध गरेको कारणले हो ? के अङगीकृत नागरिकलाई राज्यका उपल्ला पदहरुमा पुर्याउनु हुन्न भनेर हो ? कि जानकी मन्दिरको भेटीले मात्र दुई नम्बर प्रदेश चल्न सक्दैन भनेको कारणले हो ?
यदी एमालेमाथी लगाईएका यिनै आरोपहरु हुन भने, मेरो विचारमा यि सबै बकवास मात्र हुन । एमालेले एक मधेश एक प्रदेश मानेन रे तर उहाँहरुले किन छाड्नुभयो ? उपेन्द्र यादवजी र मातृका यादव जी आफैले अङगीकृत हाम्रो एजेण्डा होईन भन्नु भएको छ । जुन कुरा एमालेले सुरु देखी नै उठाउँदै आईरहेको छ । र अहिले पनि अडिग छ । अनी कमजोर आर्थिक आय स्रोत भएको दुई नम्बर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन पहाडका जिल्लाहरु जोड्नु पर्छ । तराईलाई पहाडबाट अलग गर्नुहुन्न भन्ने कुरा सही कि गलत ?
यतिसम्मकी मधेशी मोर्चाले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन संसदमा भोट हाल्न आयो । ४६ जना मधेशी जनता मार्ने सरकारका प्रधानमन्त्री सुशिल कोईरालालाई भोट हाल्यो । तर मधेश आन्दोलनमा मर्ने ४६ जनालाई दश लाखका दरले राहात दिने काम ओली सरकारले गर्यो । घाईते र अपाङगहरुका नाममा ३४ करोड रुपैयाँ ओली सरकारबाटै मधेशी मोर्चाले बुझ्यो । ओली प्रधानमन्त्री बन्दा नाकाबन्दी थियो । उहाँ आएपछी हट्यो । अब कसरी एमाले मधेश विरोधी भयो ?
अर्को मधेशका एक सय १६ सीट मध्य ४० सीटमा एमालेले जीतेको छ । जम्मा ११ सीट मात्र मधेशी मोर्चामा आवद्ध दलहरुले जीतेका छन् । अब लोकतन्त्रमा जनताले दिएको भोटको कदर नहुने हो भने के कुराको अर्थ हुन्छ ? म यती भन्छु, मधेशका सबै सीटमा जीतेर वा बहुमत ल्याउ अनि मात्र संविधान संशोधनको कुरा गर ।
एमालेलाई जनताको माझमा जानबाट रोकेर लोकतन्त्र समृद्ध बन्दैन । मधेशी जनताको हित हुदैन । एमालेले त मधेशमा विकास निर्माणका लागि अहिलेसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन गरेको प्रमाण काफी छ । बरु मधेशी मोर्चामा आवद्ध दलका नेताहरु २०६३ सालपछी ५६ जना मन्त्री बन्नु भएको रहेछ । तपाईहरुले चाँही मधेशी जनताको हितमा के गर्नुभयो ?
सांसद यादव एमालेका केन्द्रय सदस्य हुन ।